बैंककमा एंटी-एजिङ वृद्धि हार्मोन - एचजीएच थेरेपी थाईल्याण्डमा
मानव वृद्धि हार्मोन समय भन्दा पहिलेको विरुद्ध। थाईल्याण्डमा नैदानिक ​​परीक्षणको परिणाम।
1999 मा, राष्ट्रीय संस्थान थाईल्याण्ड उमेर बढाएको मानव विकास हार्मोन को प्रयोग संग प्रतिस्थापन थेरेपी को प्रभावशीलता संग सम्बन्धित धेरै धेरै महत्वपूर्ण अध्ययनहरु लाई प्रकाशित गरेको छ (HGH) .यो अध्ययन को उद्देश्य उद्देश्य थियो र केवल हार्मोन उपचार HGH को प्रभावकारिता को पुष्टि गर्न को लागि, तर एक संतुलित अध्ययन को संचालन गर्न को लागि जो उमेर मा उमेर मा HGH को संभावित उपयोग संग सम्बन्धित चिकित्सा ज्ञान को बढावा दिन को लागि प्रयास गरेन। अध्ययन सहभागीहरू दुई समूहमा विभाजन गरियो। प्रयोगात्मक समूह HGH को इंजेक्शन प्राप्त गरियो, जबकि नियंत्रण समूह ले placebo को इंजेक्शन प्राप्त गर्यो।
डबल-अनुहार अध्ययन HGH
प्रकृति द्वारा अध्ययन डबल-अन्धा थियो, यानि न त डाक्टरहरु र न पनि रोगहरु को थाहा थियो कि HGH को इंजेक्शन प्राप्त गरियो, तर जो placebo इंजेक्शन मा थियो। यो अध्ययन एक राष्ट्रिय घटना थियो जुन थाइल्यान्ड भरमा क्लिनिकहरू समावेश गर्दछ। मानव रोग हार्मोन को कमी को लक्षणहरु संग रोगहरु र केहि दुवै को परीक्षा मा भाग लिया। अध्ययन को वस्तुहरु को एक समूह को आकार मा महत्वपूर्ण थिए र महत्व को निम्न स्तर को पहिचान गर्न को क्षमता संग उच्च स्तर को विश्वसनीयता प्रदान गर्न सक्षम थियो।
यद्यपि यो अध्ययन मुख्यतः मानव विकास हार्मोनको प्रयोग गरी प्रतिस्थापन थेरेपी को समर्पित भएको थियो, यदि आवश्यक भएमा, बिरामीले पनि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टरोन र एस्ट्रोजन प्राप्त गरे। यस अध्ययनको उद्देश्य मात्र मानव विकास हार्मोन को सम्भावित फाइदा र अन्य हार्मोन जस्तै टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टरोन र एस्ट्रोजन जस्तै प्रदर्शन गर्न को लागी थिएन। यो HGH इंजेक्शन को चिकित्सकीय क्षमता को बढावा गर्न को लागि थियो।
डा। थियरी हर्टोगे, एक नैदानिक ​​अध्ययन प्रकाशित भएको छ जसमा HGH हार्मोन को प्रतिस्थापन उपचार मानव विकास हार्मोन को कमी देखि पीडित रोगियों को दिइएको थियो। यी रोगीहरूसँग एकदमै व्यापक उमेर दायरा थियो। सबैभन्दा सानो रोगी 27 वर्षको उमेर र पुरानो मरीज 82 थियो। अध्ययनको सुरुमा डार्ट हर्टोगे र तिनका सहकर्मीहरूले सबै रोगीहरूको अवस्थालाई राम्ररी दियो।
उनीहरूले आफ्ना रोगीहरूको स्वास्थ्य स्थिति दस्तावेज गरे पछि, तिनीहरूले दुई महिनाको दौरान प्रतिस्थापन इंजेक्शन हार्मोन HGH गरे। डार्ट हर्टोगेले आफ्ना रोगीहरूसँग भेट्टाए र उनलाई एक सर्वेक्षण भर्न आग्रह गरे जसमा उनीहरूले मानव विकास हार्मोनको इंजेक्शनबाट प्राप्त फाइदाको प्रयोग गरी उपचारको प्रभावबारे जवाफ दिए। निम्न प्रश्नावली को सबै प्रश्नहरु को सूची र रोगी को प्रतिशत जसको संकेत हो कि उनको अवस्था सुधार भएको थियो प्रतिक्रिया को एक सूची हो।
HGH कमी र उमेरको शारीरिक लक्षण
अनुहारमा झुर्रकहरूको कम संख्या - 75,5%
शिकनहरू उमेरको उमेरका सबै भन्दा राम्रो संकेतहरू मध्ये एक हो। छालाले यसको लोच र पूर्णता गुमाउन थाल्यो र यसलाई लाइट लाइन र गहिरो झन्डाको रुपमा बनाइएको हुन्छ। मानव विकास हार्मोनको इंजेक्शनबाट लाभ उठाइएका धेरै रोगीहरू, ह्वाइटले राम्रो रेखाहरूलाई नरम बनाएको छ वा झन् झन् झन् झन्झटमा परिणत भयो। मानव विकास हार्मोनसँग इंजेक्शनहरू छालाका कक्षहरू चिसो र अनुहार मांसपेशिहरु को बल सुदृढ गर्न सक्षम छन्, जसमा दुवै झुर्रियों को लापता मा एक भूमिका निभािन्छ।
गर्दन र अनुहारमा हल्का छाला - 67%
अधिक ठोस मांसपेशिहरु 60.7%
HGH इंजेक्शन को दुई महिना भित्र डार्ट हर्टोगे को अध्ययन मा शामिल 10 भन्दा बढी भन्दा बढी रोगहरु मा, मांसपेशी टोन बदल्यो। मानव विकास हार्मोन मांसपेशिहरु र उनको बल को सौंदर्य उपस्थिति परिवर्तन गरेर मांसपेशिहरु टोन र मांसपेशी आकार जस्तै वृद्धि गर्न सक्षम थियो। यदि रोगीहरू मानव विकासको हार्मोनको स्वस्थ स्तर हो भने, मांसपेशिहरु इन्सुलिन-जस्तै विकास कारक 1 को रूप मा अधिक ऊर्जा र ईन्धन प्राप्त गर्दछ, जो मांसपेशियों को स्वास्थ्य को अनुकूलित गर्दछ, विशेष रूप देखि केहि उपयोगी व्यायाम र आहार संग संयोजन मा।
निचो स्तरको शरीर वोसो - 48%
यसको परिणामको रूपमा यस अध्ययनमा भाग लिने रोगहरूको लगभग आधा HGH इंजेक्शनहरू शरीर मास सूचकांक परिवर्तन गरियो। मानव विकास हार्मोन चयापचय मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभािन्छ, जो धेरै प्रभाव पार्छ कि कसरी शरीर मा मांसपेशी र पशु चारा को जमा, तर विशेष रूप देखि मध्य भाग को आसपास। जिगर HGH लाई IGF-1 मा घुमाउँछ, र अस्वास्थ्यकर वसा ऊतक तोड्न र यसलाई थप ऊर्जामा बदल्न को क्षमता छ!
34.5 मा मोटो, बलियो छाला%
उत्तरदायीहरूको तेस्रो भन्दा बढी छाला टोनमा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन उल्लेख गर्यो। यी रोगीहरू छालाको संरचनामा परिवर्तनको अनुभव गर्थे। परिणाम मांसपेशिहरु को तनाव र सेल हाइड्रेशन बढायो, न केवल झुर्रियाँ र सिगिंग त्वचा को गायब प्रवृत्ति हो, तर यो शारीरिक परिवर्तनले पनि छाला को लचीलापन र मात्रा को बढाने मा योगदान गर्छन। शरीरमा कुनै अन्य कक्षहरू जस्तै छाला कक्षहरू इष्टतम उपयुक्त हाइड्रेशन प्रकार्य चाहिन्छ। छाला कक्षहरू फरक छैनन्। फरक यो हो कि छाला एक अंग हो जुन बाह्य दबाव को रूप मा लगातार छ, जस्तै सूर्यलाइट, तापमान र हावा। मानव विकास हार्मोनले छालालाई तत्वबाट बचाउन सक्छ र निर्जलीकरण रोक्न सक्छ, जसले छाला टाढा राख्न, बलियो र क्षतिबाट प्रतिरोध गर्न मद्दत गर्दछ।
बढेको कपालको मात्रा - 28,1%
यस अध्ययनमा सहभागीहरूको चौथाई भन्दा बढी मानव विकास हार्मोनको निष्कर्षको कारणले गर्दा उनीहरूको कपालमा परिवर्तनहरू अनुभव गर्दछन्। यद्यपि यो सकारात्मक नतिजा तृतीय पक्ष हो, HGH उपचार लिनुको एक महत्वपूर्ण भाग, उपचारको परिणामको रूपमा स्वस्थ बाल विचार गर्नुहोस्। जब छाला को कोशिकाहरु लाई उचित रूप देखि रिहाइड्रेट र रिज्यूज गर्दछ, यसले बाल कपाल को स्वास्थ्य को पनि बढावा गर्दछ। कपाल कपाल मात्र छाला कोशिकाहरूको निष्क्रिय उदाहरण हो जसले छाला स्वास्थ्यले बालको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ।
संज्ञानात्मक र भावनात्मक germanosilicate हार्मोन थेरेपी को उपयोग, मानव विकास
भावनात्मक सन्तुलनमा सामान्य वृद्धि - 71,4%
सामान्य भावनात्मक अवस्थामा लगभग तीन-चौथा रोगीहरूले सुधार गरे। लामो समयसम्म मानव विकास हार्मोनको कमीले मानसिक स्वास्थ्यमा कमी ल्यायो र यो अध्ययनको नतिजाहरूले थप प्रमाणहरू प्रदान गर्दछ कि मानव विकास हार्मोनको कमीले मानसिक स्वास्थ्यलाई कम गर्न सक्छ। धेरै रोगीहरूको लागि, एचएचएचले दैनिक जीवन अधिक सहनशीलता र मनोरञ्जन दिन सक्दछ। यो आंशिक रूपमा आत्म-धारणामा परिवर्तनहरूको कारण हो जुन शरीरमा हुने भौतिक परिवर्तनहरूबाट उत्पन्न हुन्छ, तर HGH पनि मस्तिष्क रसायन विज्ञान अनुकूलन गर्न सक्षम छ!
ऊर्जा स्तर बढ्यो - 86.8%
अध्ययनमा सहभागी रोगीहरू बीच। थियरी, हरेक9रोगीहरूमध्ये लगभग 10 ऊर्जाको मात्रा बढेको अनुभव गर्दछ। अधिकांश रोगहरु जो विकार देखि ग्रस्त हुन्छन्, HGH कमी को थकान को रूप मा प्रकट हुन्छ। HGH शरीर को उत्तेजित गर्न मा सक्षम छ, तपाईंलाई एक दिन लेने को लागि सचेत रहने र अधिक तैयार रहन मा मदद गर्दछ। मानव विकास हार्मोन धेरै कारणहरूको लागि यो सक्षम छ। एक कारणले यो नींदको परिणामको रूपमा यसले कायाकल्पमा अन्तिम अनुभव गर्ने शरीरको क्षमता बढाउँछ। अर्को कारण यो हो कि IGF-1 को परिणाम को रूप मा जानवरों को वसा को अपघटन, रासायनिक स्तर मा शरीर को उच्च स्तर प्रदान गर्दछ।
शारीरिक थकान बढ्यो - 86,04%
क्लिनिकल परीक्षणमा उत्तरदायीहरूको 85% भन्दा बढी। थियरीले बताए कि HGH इंजेक्शनहरूको नतिजा अभ्यास र शारीरिक कार्य गर्ने क्षमता बढेको छ। मानव विकास हार्मोनले चयापचय को स्तर मा वृद्धि गर्दछ जो मांसपेशियों लाई ऊर्जा मा वृद्धि गर्दछ। ऊर्जा मा यस वृद्धि को यस काम को उपयोग मा वृद्धि को अतिरिक्त शारीरिक गतिविधि को वृद्धि स्तर को सामना गर्न को क्षमता को क्षमता मा सुधार गर्दछ। साथै, हार्मोन प्रतिस्थापन थेरेपी HGH दर को बढाता छ जसमा शरीर को व्यायाम र चोट पछि ठीक हो। नींदको घडीको दौरामा बढ्दो गतिविधिको पुनरुत्थान भनेको तपाईं कठोरता र अधिक प्रायः व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं कम नकारात्मक प्रभावहरूसँग बिस्तृत बिस्तारमा जान सक्नुहुन्न - 82,5%
मानव विकास हार्मोनको साथ प्रतिस्थापन थेरेपीले शरीरको सबैभन्दा बढी निद्राबाट निकाल्न सक्ने क्षमतालाई सुधार गर्दछ। HGH मुख्यतः रातमा गोप्य छ र यो हुन्छ जब शरीर थकान र लुगाबाट पाउँछ, दिनको समयमा जम्मा हुन्छ। HGH को कमी संग रोगीहरु को लागि, शरीर स्वस्थ नींद को पूरा फायदाहरु को अनुभव नहीं गरेर रहेको छ र अंततः यो देखि पीडित। यद्यपि सबै भन्दा उपयोगी रातको आठ घण्टा लाग्न सक्छ, आवश्यक भए स्वस्थ HGH स्तरका बिरामीहरू, कम निद्रामा बढी अनुकूलन गर्न सक्दछ। यसको अतिरिक्त, मध्यम नींद विकार देखि पीडित रोगहरु, HGH स्वस्थ नींद आदतों को पुनर्स्थापित गर्न को लागि, शरीर को प्राकृतिक सर्कडी ताल को पुनर्स्थापित गर्न सक्छन्।
तनाव सामना गर्न बढेको क्षमता - 83,7%
हामी पनि पढ्न सिफारिस गर्दछौं:
अहिले खरीदारी सुरु गर्नुहोस्!